विवाहमा दाइजो मास्क र सेनिटाइजर ! – Kathmandutoday.com
आइतबार, २ जेठ, २०७८
विवाहमा दाइजो मास्क र सेनिटाइजर !
काठमाण्डु टुडे २०७७ वैशाख २६ गते १२:३१ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २६ वैशाख– कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन जारी बन्दाबन्दीका बीच यहाँ एक जोडी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् ।
बैदिक विधिपूर्वक विवाह बन्धनमा बाँधिएका पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७ घर भएकी बेहुली अनुषा बाँस्तोला र पोखरा–३० का बेहुला दीविन भट्टराईको बिहीबार सम्पन्न विवाहमा दुवै पक्षका घरपरिवारका सदस्यको मात्रै उपस्थिति थियो । सामाजिक दूरी कायम राख्दै स्थानीय निकायसँग स्वीकृति लिएर विवाह सम्पन्न गरिएको हो । विवाहमा बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई अन्य कुनै उपहार नभइ मास्क र सेनिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री दाइजोका रूपमा दिएका थिए ।
यसैबीच विवाहको खर्च कटाएर बेहुली पक्षले विभिन्न १२ वटा सामाजिक संघसंस्थालाई रु पाँच लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । विवाह समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखालाई रु ५५ हजार ५५५ सहयोग गरिएको छ । बेहुलीका बुबा बाँस्तोलाले उक्त रकम महासङ्घका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्दै पत्रकारको सुरक्षाका लागि ज्याकेटको व्यवस्थामा सहयोग गरेको बताए ।
बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयकोआग्रह
थप ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ जनाको मृत्यु
आगामी बजेटबारे ओलीले भने– संसद जिवितै छ